Fraịde, Ọgọstụ 24, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
A na m enwekarị mmasị n’echiche nke onye isi na-ahụ maka nnata ego na-azụ ahịa na ire ahịa na ngalaba, ngalaba ngalaba. Mgbe m kwenyere na ọ ka nwere ikike, Onye isi ahia teknụzụ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị ọ dịkwa mma. Ka anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na-arụkọ ọrụ, enwere mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ enweghị ike ịnabata usoro ọhụụ ngwa ngwa ma jigide agility na ngalaba teknụzụ ha. Nhazi ahụ dị n’agbata ihe egwu na ụgwọ ọrụ. Ngalaba IT na-ejikwa ihe egwu. Ngalaba ahia na-ejikwa ụgwọ ọrụ.
Ọrụ a nke Onye isi ahia teknụzụ dere ya Blue Kai. Ọ bụ ezie na ejighi m n’aka na enwere onye nwere aha ya n’ezie, enwere ọtụtụ ndị isi azụmaahịa na-eyi okpu abụọ. Site n'ịhụ na otu onye na-ahụ maka ihe egwu na ụgwọ ọrụ, ị nwere onye na-agagharị ngwa ngwa ka o kwere omume ma hụ na teknụzụ dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi.
Igodo nke echiche infographic bụ nke ahụ akụrụngwa ahịa na-aza ajụjụ maka oke ego nke IT na-akwụ ụgwọ ma na-ahụ maka ego buru ibu na ibu. Maka nke a, ọ chọrọ otu akụ ga - amata otu esi ahọta teknụzụ ịre ahịa.
Tags: onye isi teknụzụ ahịa
Aug 25, 2012 na 6:36 PM
Echere m na ị bụ nri, Douglas. Mgbe ụfọdụ anyị na-echefu na akụkụ "ozi" nke "Teknụzụ Ozi" bụ maka ebumnuche ahịa - iji nweta arụmọrụ yana, n'ikpeazụ ịrekwu ngwaahịa na ọrụ. Ahịrị ndị ahụ na-agbasa ma anyị niile chọrọ inwe mmekọrịta. 😉
Aug 26, 2012 na 11:36 PM
CMTO yiri ka ọ dị ka onye na-etolite etolite nwere ọrụ sara mbara na ịmepụta, izi ozi, na njikwa (na-eche na uto bụ isi ihe gbasara ahịa). Enwere m ọchịchọ ịmata etu CMTO si agagharị ngwa ngwa yana ma ha na-eme mkpebi nke data na-eme. Enweela m ọtụtụ nnukwu CMO ndị na-ekwu na ahịa a na-azụ ahịa data mana ha ka na-elekwasị anya na usoro ihe efu ma amaghị onye isi ha na-eto eto.
Coach Factory tinyekwa,
Aug 31, 2012 na 9:15 PM
Akpa aka nke ndị na-emepụta ama ama mepụtara na-adọrọ adọrọ
ụmụ nwanyị ugbu a.
Inwe akpa nke ndi ama ama nwere na eme ka nwanyi nwe obi
nwere obi ike.
- tinye 2012,
Findmụ nwanyị na-ahụ ya dị ka ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha iji lee anya nkecha na sexy.
A maara ha nke ọma maka atụmatụ ndị mara mma.